Iqhinga le-Ichimoku - Reg Trading
Indlela ye- Ichimoku Kinko Hyo inika ithuba lokufumana iindidi ezahlukeneyo zesiginali esebenzayo kusetyenziswa igrafu enye. Zonke iindlela zobuchule bokurhweba, xa sisebenzisa Ichimoku Kinko Hyo kwimisebenzi yethu, kusoloko kucetyiswa ukuba zithathele ingqalelo ezinye izinto (imixholo, imvakalelo, amaxesha onyaka, oscillators, njl …), kodwa ngokuqinisekileyo ukuqonda okucacileyo kwale meko kwaye ukuvela kwayo kumele inqaku elomeleleyo lobuchule be-Ichimoku.
Njengoko obu buchule bujolise ekufumaneni eyona ndawo ingcono yokungena ngaphakathi kwehambo, iimpendulo esizifumana kwimiqondiso ngokuqinisekileyo ziya kuba zezomeleleyo kwaye kuya kufuneka ukuba ukhumbule umgca wempazamo. Ukulawulwa kwemali ngobulumko kuyayiphelisa le meko.
Apha ngezantsi, siza kufunda nzulu kwiindlela ezi-5 zokurhweba ezingasetyenziswa nanguphina umrhwebi. Njengoko siza kubona ngezantsi, yonke imizekelo ibekwe ngokwamandla e-sign evelayo: eyomeleleyo, engathathi cala kwaye ibuthathaka. Into eyahlula amandla omqondiso kulapho umqondiso ubekwe khona uhlonipha uKumo, kodwa kwezinye iimeko kunokubakho ezinye izikhombisi ezinokunceda umrhwebi kutoliko.
UTENKAN SEN / KIJUN SEN CROSS
Lo mqondiso wokurhweba usetyenziswa xa iTenkan Sen (umgca omnyama) usika iJunun (umgca obomvu) ukuya phezulu okanye ezantsi.
Isibonakaliso esivelisiweyo sisiphumo xa iTenkan Sen isika iNunun Sen ukusuka ezantsi ukuya phezulu. Nangona kunjalo, le miqondiso, inamanqanaba ohlukileyo okomelela ngokwendawo apho lo mqondiso wenzeka ngokubhekisele kuKumo.
Isibonakaliso esibuthathaka somqondiso sibhalwa phantsi xa ukusikwa kwemigca emibini kwenzeka ngezantsi kweKumo.
Isiginali uphawu yokungathathi hlangothi irekhodwa xa kusikwa le migca mibini kwenzeka ngaphakathi kweKumo.
Isiginali eqinileyo yomyalezo urekhodwa xa ukusikwa kwemigca emibini kwenzeka ngaphezulu kweKumo.
Isibonakaliso se-bearish siveliswa xa i-Tenkan Sen (umgca omnyama) usika i-Kijun Sen (umgca obomvu) ukusuka phezulu ukuya ezantsi.
Isibonakaliso esibuthathaka se- bearish sibhalwa phantsi xa ukusikwa kwemigca emibini kwenzeka ngaphezulu kweKumo.
Isimboli ye-bearish yokungathathi hlangothi irekhodwa xa kusikwa le migca mibini kwenzeka ngaphakathi kweKumo.
Isiginali eqinileyo yerekhodi irekhodwa xa ukusikwa kwemigca emibini kwenzeka ngezantsi kweKumo.
IKIJUN SEN CROSS
Xa ixabiso liwela i-Kijun Sen, emva koko sifumana olu hlobo lwesiginali.
Isiginali evelisiweyo yi-bullish xa ixabiso lisika i-Kijun Sen (umgca obomvu) ukusuka ezantsi ukuya phezulu.
Isibonakaliso esibuthathaka sokwenza ingxelo siyabhalwa xa i-Kijun inqunyulwa kwixabiso elisezantsi kweKumo.
Isibonakaliso se- non-nongenathile yirekhodi irekhodwa xa i-Kijun inqunyulwa kwixabiso ngaphakathi kweKumo.
Isiginali enamandla ye- bullish irekhodwa xa i-Kijun inqunyulwa kwixabiso elingaphezulu kweKumo.
Isibonakaliso esivelisiweyo yi-bearish xa ixabiso liphungula i-Kijun Sen (umgca obomvu) ukusuka phezulu ukuya ezantsi.
Isiginali ye-bearish ebuthakathaka irekhodwa xa i-Kijun inqunyulwa kwixabiso elingaphezulu kweKumo.
Umqondiso we- bearish ongathathi hlangothi urekhodwa xa i-Kijun inqunyulwa kwixabiso ngaphakathi kweKumo.
Isiginali eyomeleleyo ye- bearish irekhodwa xa i-Kijun inqunyulwa kwixabiso elingezantsi kweKumo.
Umqondiso obizwa ngokuba yiKumo Breakout wenzeka xa ixabiso lisika esinye isiphelo se-Kumo.
Isibonakaliso se-bullish senzeka xa amaxabiso engena kwiKumo aze aphule udonga lwaphezulu phezulu.
Isibonakaliso se-bearish senzeka xa amaxabiso engena kwiKumo aze aphule udonga lwayo olusezantsi ezantsi.
ISENKOU SPAN CROSS
Umnqamlezo we-Senkou kwenzeka xa i-Senkou Span A isusa i-Senkou Span B.
Kuba le migca mibini ye-Senkou icingelwa phambili ngamaxesha angama-26 ukuhlonipha ixabiso langoku, into eza kujongwa xa umqondiso uqondwa kulapho ixabiso libekwe khona xa kuthelekiswa neKumo.
Isiginali evelisiweyo yi-bullish xa uSenkou Span A (umgca oluhlaza okwesibhakabhaka) usika i-Senkou Span B (umgca onsomi) ukusuka ezantsi ukuya phezulu.
Isibonakaliso esibuthathaka somqondiso sibhalwe phantsi xa ngexesha lokusika phakathi kweSenkou, amaxabiso abekwa ngezantsi kweKumo.
Isibonakaliso sokungathathi hlangothi sirekhodwa xa ngexesha lokusika phakathi kweSenkou, amaxabiso ebekwa ngaphakathi kweKumo.
Isiginali enamandla yomqondiso ibhaliwe xa ngexesha lokusika phakathi kweSenkou, amaxabiso abekwe ngaphezulu kweKumo.
Isiginali evelisiweyo yi-bearish xa iSenkou Span A (umgca oluhlaza) inqumlisa iSenkou Span B (umgca onsomi) ukusuka phezulu kuye ezantsi.
Isibonakaliso esibuthathaka se- bearish sibhalwa xa ngexesha lokusika phakathi kweSenkou, amaxabiso abekwe ngaphezulu kweKumo.
Isibonakaliso se-bearish esingathathi hlanganye sibhalwa xa ngexesha lokusika phakathi kweSenkou, amaxabiso ebekwa ngaphakathi kweKumo.
Isiginali eqinileyo yerekhodi ibhaliwe xa ngexesha lokusika phakathi kweSenkou, amaxabiso abekwe ngezantsi kweKumo.
Xa i-Chikou Span iphakame ngaphezulu okanye iwele ngezantsi kwexabiso elihambelana nayo ke lo mqondiso uveliswayo.
Into ebalulekileyo nayo imelwe kukudibana kwe Chikou Span ngexesha lokujonga. Ngapha koko, isikhundla seChikou ngaphezulu okanye ngaphantsi kwexabiso elilinganayo alwanelanga; kufuneka kwakhona ibe nokuncamathela okungaphezulu kwemiqondiso ye-bullish kunye nesezantsi enye yezo-bearish.
Kuba i-Chikou ayikho enye into ngaphandle kwexabiso lokuvala elidluliselwe emva ngamaxesha angama-26, izinto eziyimfuneko zezi: kurhwebo olude, i-Chikou ngaphezulu kwexabiso elihambelanayo kwaye, kurhwebo olufutshane, iChikou engezantsi kwexabiso elihambelana nayo. Ukuma kwexabiso langoku xa kuthelekiswa neKumo emva koko kunegalelo ekwenzeni umqondiso ube namandla nangaphantsi.
Isiginali evelisiweyo ibizwa ngokuba yi-bullish xa i- Chikou Span (umgca ophuzi) isika ixabiso ukusuka ezantsi ukuya phezulu.
Isibonakaliso esibuthathaka serekhodi ibhaliwe xa ngexesha lokusika okungaphezulu kweChikou, ixabiso langoku libekwe ngezantsi kweKumo.
Isibonakaliso sokungathathi hlangothi sirekhodwa xa ngexesha lokusika phezulu kweChikou, ixabiso langoku limiswe ngaphakathi kweKumo.
Isiginali eqinileyo yomshicileli urekhodwa xa ngexesha lokusika okungaphezulu kweChikou, ixabiso langoku libekwe ngaphezulu kweKumo.
Isiginali evelisiweyo ibizwa ngokuba yi-bearish xa i-Chikou Span (umgca ophuzi) isika ixabiso ukusuka phezulu ukuya ezantsi.
Isimboli ye-bearish ebuthakathaka irekhodwa xa ngexesha lokuncipha kwe-Chikou, ixabiso langoku libekwe ngaphezulu kweKumo.
Isimboli ye-bearish engathathi hlangothi irekhodwa xa ngexesha lokuncipha kweChikou, ixabiso langoku libekwe ngaphakathi kweKumo.
Isiginali eqinileyo yerekhodi irekhodwa xa ngexesha lokuncipha kweChikou, ixabiso langoku libekwe ngezantsi kweKumo.
Previous Post: استراتژی های Ichimoku
Next Post: Ichimoku estrategiak